Izidakamizwa ezihamba phambili zamadoda kule 2018 | Amadoda aSitayela
Izidakamizwa ezihamba phambili zamadoda
Amakhwapha akhiqiza iphunga nomswakama. Kuyiqiniso. Ngenhlanhla, kukhona izidambisi, obekulokhu kusisiza ukuthi sigcine lezi zingqinamba zikhona isikhathi eside njengengxenye yenqubo yethu yenhlanzeko.
Ukuhlala unesandla ngaphandle kwekhaya kungakusiza uxazulule ngokushesha isimo esinamahloni, ikakhulukazi emsebenzini. Ngakho-ke cabanga ngokuthola usayizi wokuhamba wesikhwama sakho sehlombe futhi, noma lapho uhambisa khona izinto zakho siqu.
1 Futha, unamathele noma uqhubekele phambili, yikuphi okungcono?
1.1 Izinzuzo nezingozi zokufafaza
1.2 Ubuhle nobubi bezinduku nama-roll-ons
2 Ama-deodorants angeyena okwenziwa ngamaphunga wemvelo
Futha, unamathele noma uqhubekele phambili, yikuphi okungcono?
Ama-deodorants anezinhlobo ezintathu: isifutho, induku ne-roll-on. Uma siqhathanisa imikhiqizo esezingeni elifanele, ukusebenza kwayo kuyafana kakhulu. Kepha ngamunye unochungechunge lwezinzuzo nobubi ezingakusiza uthathe isinqumo:
Izinzuzo nezingozi zokufafaza
Inzuzo enkulu yesifutho uma iqhathaniswa namanye amafomethi ukuthi singasetshenziswa zombili emakhwapheni nakunoma iyiphi ingxenye yomzimba. Ngenxa yalokhu, amadoda amaningi awasebenzisa njengamakha okuwukuphela kwawo ezimweni ezithile.
Uma ungenaso isikhathi sokuchitha ekuseni, izifutho zokufafaza zizokusebenzela kahle. Isizathu ukuthi zivame ukoma ngokushesha kunezinti kanye nama-roll-ons. Ngokuvamile, usukulungele ukungena imizuzwana embalwa ngemuva kokuyisebenzisa. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo ayisasebenzisi ama-CFC (ama-chlorofluorocarbons) ekwenziweni kwawo. Lezi zonakalise ungqimba lwe-ozone, olusivikela emisebeni ye-ultraviolet.
Kodwa-ke, banezinkinga zabo. Okuyinhloko kungenzeka isidingo sokuyisebenzisa endaweni enomoya omuhleUkuphefumula akuyona into emnandi kakhulu noma ezuzisa kakhulu emhlabeni.
Ngokuqondene nemikhiqizo, kuncike kakhulu ekuthandweni kwephunga ngakunye. I-Rexona Invisible Ice Fresh ikalwe kakhulu ngephunga layo elisha, elithanda ukuhlala usuku lonke. IBiotherm, iNivea kanye I-Ax (enikela ngamaphunga ahlukahlukene ongakhetha kuwo) ngeminye imikhiqizo yesifutho ene-deodorant okufanele uyicabangele.
Ubuhle nobubi bezinduku nama-roll-ons
Uma kukhulunywa ngezinduku nama-roll-ons, ikhono layo lokulwa nokujuluka kuthathwa njengokufafaza ngenhla kancane. Isizathu ukuthi bayakuvumela ukuthi usebenzise inani elikhulu lomkhiqizo. Enye indlela abadlula ngayo ama-deodorants okufafaza ukuthi abukho ubungozi bokuwaphefumula isikhathi ngasinye lapho esetshenziswa.
Ngokuqondene nobubi, qaphela ukuthi bangashiya izinsalela ezingutsheni. Kuyadingeka ukuthi uqaphele kulokhu futhi linda kancane ngaphambi kokugqoka, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngezingubo ezimnyama. Lokho kuvame ngokwanele ukuvimbela ukungcola. Ekugcineni, kunesimo sayo njengomkhiqizo wendoda eyodwa (iqiniso lokuthi, ngokungafani nemithi yokufafaza, ayikwazi ukubolekiswa noma ukwabiwa), engabonakala njengenzuzo nobubi.
I-L'Oréal Carbon Protect mhlawumbe i-roll-on deodorant ehlonishwa kakhulu. UGillette noSanex phakathi kwezingabizi futhi Vichy phakathi kokuphela kokuphela amanye ama-roll-on nama-stick deodorants anezilinganiso ezihamba phambili emakethe.
Ama-deodorants angeyena okwenziwa ngamaphunga wemvelo
Mhlawumbe isinqumo esibaluleke kunazo zonke lapho uthenga i-deodorant akuyona ifomethi noma uphawu, kodwa ukwakheka kwayo. Izidakamizwa zokufakelwa zibuzwa kabanzi. Iphutha lilele kuzithako ezifana ne-aluminium, parabens noma ama-silicone. Lezi zingangena egazini ngomakhwapheni bese zanqwabelana ezicutshini ngokusetshenziswa isikhathi eside. Umzimba awuzidingi lezi zinto, ngakho-ke kuwumqondo omuhle ukubheka amalebula ngaphambi kokukhetha isidambisi, kanye nanoma yimuphi omunye umkhiqizo wenhlanzeko.
Ama-deodorants emvelo athathwa njengaphephile. Ngokuvamile zenziwa ngosawoti wamaminerali ongacasuli isikhumba. Amakhwapha akho angaqhubeka nokujuluka, kepha akha ungqimba oluvimbela iphunga kumagciwane. Okuthandwa kakhulu yi-alum stone deodorant. Ububi bawo ukuthi kuyadingeka ukuwamanzisa ngamanzi ngaphambi nangemva kokufakwa ngakunye. Ngokufanayo, itshe kumele lomiswe (ngokwesibonelo, ngethawula) ngaphambi kokulibeka.
ISchmidt's ingumkhiqizo wamahhala we-aluminium, i-propylene glycol, amakha okufakelwa nesihluku sezilwane. Ihlinzeka ngama-deodorants emvelo angathathi hlangothi, kanye namakha ahlukahlukene wemvelo, njenge-lime ne-bergamot. Ungakhetha phakathi kwebhalisamu noma induku ejwayelekile.
Usawoti womhlaba, iBiotherm noma iSaltz amanye imikhiqizo ekhombisa ngokusobala ukuthi iziphuzo zazo zokudla okunamanzi aziqukethe i-aluminium noma ama-parabens. Uma kuqhathaniswa nezidakamizwa ezijwayelekile, amanani abo aphakeme kakhulu. Ingabe kuwufanele utshalomali? Kubantu abaningi, yebo, ngoba ukubheja kuma-deodorants emvelo kuyisinqumo esihlakaniphile sezempilo. Ngakolunye uhlangothi, kufanele kuqashelwe ukuthi yize kusiza, akwanele ukuqeda ngokuphelele amakhemikhali. Lona ngumsebenzi ongenakwenzeka, ngoba siphila nsuku zonke sivezwe inani elikhulu labo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izimonyo » Izidakamizwa ezihamba phambili zamadoda